Ndakamanikidza bamunini kuti vandisvire ndavapindira vachigeza! - Masasi eHarare
DzeBonde Ndakamanikidza bamunini kuti vandisvire ndavapindira vachigeza!
Ndakamanikidza bamunini kuti vandisvire ndavapindira vachigeza!
Bamunini,bamunini murikugeza here, ndakashedzera zvangu ndiri panze pebathroom
ofcoz I knew bamunini Francis vainge varimo vachigeza but nyaya iripo ndeyekuti ndaishaya
kuti ndovatanga sei .
Ndaingotenderera panze kunge dzungairwa ririkushaya zvekuita ,akomana ka usadherere chinhu chinonzi chikara or zemo kana rakakubata ,ndopaunoona kuti unogona kutongwa nechawakatakura . Ndainge ndakamonerera Zambia apa ndichigaya zano, ‘ndopinda ndiri musvo here or ndozobvisira mukati,but ko vakaramba then votaurira mukoma wavo, kovakatanga kuscreamer imomo ndaiti chii’ .Ndakambozvidzora ndokuenda kukitchen ndokunoti sip sip vodka yandainwa apa kadzungu kaye ndokubva kati fee ,asi nyadzi hadzina kubva ndakazongoroverera mwoyo padombo ndokusvikonovhura door repabathroom ko raisakiyiwa ka makey ndainge ndabvisa kare two weeks back pandainge ndagaya zano iri. “Mune munhu arikugeza” Bamunini vakadaro vachishamisika ndichipinda apa vaive nesipo yairera mumusoro saka vainge vakaita kakutsunzunya kuti vasatoshorwe . “Ndirikuzviziva bamunini” ndakadaro ndichivhara door apa hana ichirova ,maziso angu ainge akatarisa pamboro yavo yainge yakarara zvayo, ndakanzwa beche rangu rakuita kuvhita vhita
nechikara apa rakutotota ,iyowo hana yawedzera beat neexcitement.
“Ko chii maiguru” Francis akadaro achibvunza “Kwakanaka here” akaenderera mberi achipfugama kuti atore mvura mubucket abvise sipo yaimutosvora. Ndakabva ndati chance given ndiye katanu kazambia kaye ndokuswedera padhuze, kwainge kusina mvura saka bamunini vaigeza mushower nebucket.Vakati vachisimudza musoro ndokusanga nemazamu angu wanike ah ko nyaya yacho zvayatoipa nhai. “Ah ko maiguru chii chirikuitika ,handisati ndapedza kugeza” vakadaro vachishamisika apa maziso achiyeva chimiro changu “Haa bamunini haikona kuita semwana mudiki apa, musanyepedzere kupusa apa, musaite kunge musirikuziva zvirikuitika” ndakadaro apa ndichiswedera padhuze. “But maiguru hazviite ka iyi ko mukoma vanozoti chii” akabvunza apa achiswedera kumashure “Ah vanenge vaudzwa nani “ ndakapindura “ Haa maiguru musadaro kani” akadaro apa ndainge ndamuisa mukona manje no escape.
“Bamunini itai semunhu mukuru,munofunga kuti chero mukatiza muno ini ndikabudawo ndisina kupfeka ndichiscreamer anonzi arapper mumwe ndiani”, ndakadaro giving him a thought . Ndakaona shasha yakuprocessor nyaya iyi ndakatoziva kuti ndahwina apa. Ndakabva ndangotora mboro yavo mumaoko angu ndokutanga kuipuruzira apa rumwe ruoko ruri pamachende, ndokunzwa yodaira yotanga kuzvimba muruoko rwangu apa kufema vainge
vatochinja gear “Bamunini motongoita zviripo, at least ndirikuita nemi ko dai ari mumwe munhu chii chirinani, mukoma wenyu aramba kudzoka saka motombomugara nhaka achiri mupenyu” ndakadaro nekazwi kanyoro nyoro ndichikisser muhuro mavo apa yainge yamira zvino hmmm masasi eharare bamunini vainge vakatakura uno mukwimba chaiwo wandainge ndadira mukoma wavo chaiwo, apa yainge yati twii zvino ichigwinha gwinha .
Ndakatora maoko avo ndokumaisa pamazamu angu iwo ndokubva vatanga kubatirira. Musi uyu ndainyatsoda zvekuitwa rough chaizvo zviye zvekupedza shungu saka ndakabva ndazevezera ndikati “Bamunini nhasi nyatsondiitai chaizvo chaizvo, kana tikazobatwa at least ndoziva kuti ndopinda busy iripo” , ipapo bamunini vakabva vachinja mood ndakaita kunge ndavapa permission yekuita zvavanoda chaizvo, vakandidhonza pedyo ndokutanga
kunyatsondibata ndobva vati chi kiss. Ini ndikati handei bamunini rega ndikuratidzei kakutapira kunoita kugara nhaka, ndaiita kudzoserawo makiss apa ndichikwenyerera gotsi ravo, apa vachibata bata magaro angu vobva vamboripa tumambama, ko magaro ndainge
ndakatakurawo kwete ekutamba.
“Ba ba bamu bamunini kani “ ndakadaro apa ndonakirwa nemboro yavo yavainge vaisa pakati pezvidya zvangu, vainge vasina kuiisa mukati asi vaiitambisa iri pakati zvekuti ndainzwa matinji angu achiita kuvhurika achiita kuzorera hunyoro hwangu pavari, vaimboti potsei yobva yaita seyakuda kupinda vobva vaibuditsa zvekuti ndaibva ndanzwa kamwe kakuzipirwa kari mberi, ndakazoti zvino ndanzwa kuti haa ndakuvara neanticipation ndokubva ndangobatirira pamashower tap ndichivafongorera, apa vakange vasisaite zviye zvekupusa pusa, vakabva vatora muzhambarara wavo votsvaga beche rangu. Ndainge ndatononokerwa zvekuti ndakabva ndaitora reruoko rwangu ndichiinangisa ndiye pfeee yuwiii kutapira ,ndakanzwa ropa richimhanya mhanya nemuviri wese apa yaiita kudziya ichipinda mandiri kuzoti tumvura from his wet body twaitonhora, muviri wangu wakabva watoita confusion because of the contrast.